Dhaqaalaha xumaaday ee Nigeria - BBC Somali
Dhaqaalaha xumaaday ee Nigeria
Magaalada Lagos ayaa caan ku ah gawaarida qaaliga ah ee u badan kuwa raaxda. Waxaa magaalada ku yaalla goobo badan oo lagu iibiyo gawaarida noocaasi ah, balse bilihii dambe waxaa hoos u dhacay iibka gawaaridaasi.
Sababta ugu weyn ee keentay hoos u dhaca iibsiga gawaarida ayaa ah qiimaha shidaalka ee dhulka sii galaya. In kasta oo shidaalka uu u dhigmo boqolkiiba 15 dakhliga dhaqaalaha Nigeria, ayaa hadda waxa uu saameyn weyn ku leeyahay Nigeria.
Dowladda Nigeria oo xukunka qabsatay sanadkii lasoo dhaafay ayaa isku dayaysa in ay kala duwid ku sameyso ilaheeda dhaqaalaha. Waxa ay rabtaa in ay maalgashi ku sameyso warshadaha, korontada, wadooyinka iyo buundooyinka si dhaqaalaha dalka uu u kobco. Balse lacagta ay ka hesho shidaalka ayay u adeegsan karta hormarkaasi oo dhan.
Malaayiin qof oo Nigerian ah ayaa ku nool xaalad saboolnimo ah, waxaana dalkaasi sanad waliba shaqo raadis ah in ka badan 2 milyan oo dhalinyaro ah.
Taasi ayaa ah digniin culus. Nigeria oo dhaqaalo badan kasoo gali jiray iibinta shidaalka ayaa hadda waxaa si ba’an u saameeyay qiima dhaca ku yimid suuqyada shidaalka caalamka.